चीनद्वारा हङकङ मामिला प्रमुख बर्खास्त- विश्व - कान्तिपुर समाचार
चीनद्वारा हङकङ मामिला प्रमुख बर्खास्त
बेइजिङ — चीनले हङकङ र मकाउ मामिला हेर्ने आफ्ना उच्च अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ । हङकङ र मकाउ मामिला कार्यालय (एचकेएमएओ) का निर्देशक झाङ सियाओमिङलाई हटाएर सिया बाओलङलाई ल्याइएको मानव संसाधन मन्त्रालयले बिहीबार घोषणा गरेको छ ।
६७ वर्षीय सिया ‘चाइनिज पिपल्स पोलिटिकल कन्सुलेटिभ कन्फ्रेन्स (सीपीपीसीसी) का पुराना उपाध्यक्ष हुन् । राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २००३ देखि २००७ सम्म झेजियाङ प्रान्त कम्युनिस्ट पार्टीका सेक्रेटरी रहँदा सिया उनको उप–सेक्रेटरीका रूपमा काम गरिसकेकाव्यक्ति हुन् ।
प्रमुखबाट हटाइए पनि झाङ एचकेएमएओमै उपनिर्देशक पदमा रहने र कार्यालयका दैनिक गतिविधि हेर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । लामो समयदेखि सरकारविरोधी प्रदर्शन भइरहेको चीन नियन्त्रित हङकङमा झाङ पद गुमाउने हालसम्मकै उच्च अधिकारी हुन् । चीनले यसअघि जनवरीमा हङकङ सम्पर्क कार्यालयका प्रमुखलाई पदमुक्त गरेको थियो । शंकास्पद व्यक्तिलाई मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे सरकारले सात महिनाअघि विधेयक ल्याएदेखि हङकङ अशान्त छ ।
राजनीतिक रूपमा फरक आस्था राख्नेविरुद्ध विधेयक लक्षित हुन सक्ने भन्दै हङकङमा प्रदर्शन सुरु भएको थियो । लगातारको प्रदर्शनपछि हाल विधेयक फिर्ता लिइए पनि थप स्वतन्त्रताको मागसहित लोकतन्त्रवादीको आन्दोलन जारी छ । हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले विधेयक फिर्ता भइसकेकाले प्रदर्शनको कुनै औचित्य नभएको बताउँदै आएकी छन् ।
बेइजिङ समर्थित उनले प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै चिनियाँ नेतृत्व असन्तुष्ट रहेको भन्ने समाचार बाहिरिए पनि औपचारिक हस्तक्षेप भने भएको छैन । चीनले अमेरिकालगायतका राष्ट्रले प्रदर्शनलाई समर्थन गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।उसले हङकङको विषय आफ्नो आन्तरिक मामिला भन्दै हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिए पनि खासै ठोस कदम भने चालेको छैन । केन्द्रबाट हङकङ मामिला हेर्ने प्रमुख परिवर्तनले भने बेइजिङ केही आक्रामक देखिएको छ ।
‘हङकङ मामिला प्रमुखलाई हटाएर सीले बल्ल हस्तक्षेप गरेका छन्,’ हङकङ बाप्टिस्ट विश्वविद्यालय राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक जाँ पियरे क्बेस्टानले बताए । बेइजिङले घुमाउरो तरिकाले लामो समयदेखि अशान्त हङकङमा इच्छा देखाउनुको अर्थ त्यहाँ थप राजनीतिक दबाब पर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०७:५६
ओलीका २ वर्ष : सहरभरि हानिकारक कण
वाम घोषणापत्रमा राजधानीलाई दुई वर्षभित्र फोहोर, धूलो, हिलो र प्रदूषणमुक्त बनाउने भनिए पनि वायु प्रदूषण झन् बढेको छ । पछिल्लो समय उपत्यकाका विभिन्न ठाउामा धूवााधूलोका हानिकारक कण मापदण्डभन्दा निकै बढी पाइएको छ।
फाल्गुन २, २०७६ मकर श्रेष्ठ
काठमाडौँ — कोटेश्वरबाट ना४ख ८०२४ नम्बरको कन्टेनर बिहीबार ११ बजेर २० मिनेटमा सातदोबाटोतर्फ गइरहेको थियो । अर्को कन्टेनर जडीबुटीबाट कोटेश्वरतर्फ आइरहेको थियो । त्यसको अघि र पछि साना–ठूला सवारीको लाम थियो । कोटेश्वर चोकको जाम छिचोल्दै अघि बढ्न कन्टेनरका चालकले एक्सिलेटर दबाउँदा धूवाँको मुस्लो निस्किरहेको थियो ।
कन्टेनरको पछाडि रहेको मोटरसाइकलका चालक त्यसबाट बच्न हेल्मेटको भाइजर झारेर अनुहार छोपिरहेका थिए । बिहानको पढाइ सकेर जडीबुटीतर्फ जाने पैदल यात्रु पनि मुख छोपेर अघि बढिरहेका थिए । धूवाँको मुस्लो फ्याँक्दै उक्त कन्टेनर पनि सातदोबाटोतिरै लाग्यो ।
त्यही समयमा बानेश्वरको संघीय संसद् भवनअगाडि कालोपत्रे गर्न कामदारले मेसिन लगाएर सडकको धूलो उडाइरहेका थिए । धूलोले वरिपरिका मान्छे चिन्न नसकिने गरी छोपिएका थिए । मास्क हुनेले मास्क लगाए, नहुने हातले नाक–मुख छोपे । कार्यालय समयमा सडक कार्यालयले सर्भिस ट्र्याक बन्द गरेर कालोपत्रे गर्न लागेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय सडकका धूलो तथा सवारी र उद्योगको धूवाँको कण स्वास्थ्यका लागि हानिकारक बनिरहेका छन् । वातावरण विभागका अनुसार पछिल्ला २४ घण्टामा रत्नपार्कको हावामा पीएम २.५ का कण ९२ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर देखिएको छ । भैंसेपाटीमा ६५, पुल्चोकमा ५४, शंखपार्कमा २४ माइक्रोग्राम मापन भएको छ । पीएम २.५ भनेको रौंको मोटाइको झन्डै ३० भागको एक भागभन्दा सानो हुन्छ । जुन आँखाले समेत देख्न सकिँदैन । सरकारको २०६९ साउन २९ को निर्णयअनुसार वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डमा पीएम २.५ कण प्रतिघनमिटर ४० माइक्रोग्राम मात्रै हुनुपर्छ । ‘योभन्दा बढी हुनेबित्तिकै रगतमै असर गर्छ,’ वातारण विभागका विज्ञ हसना श्रेष्ठले भनिन्, ‘काठमाडौंमा इँटाभट्टा, उद्योग र सवारी साधनको प्रदूषण बढेकाले यो मौसममा हानिकारक कण बढी हुन्छ ।’ जुन कण सामान्य मास्कले समेत नछेक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. अर्जुन कार्कीले आँखाले नदेख्ने धूलोको कण सिधै फोक्सोको कुनासम्म पुग्ने बताए । ठूलो कण नाकको रौं, घाँटी र फोक्सोको माथिल्लो भागमा अड्किए पनि सानो कणले सिधै फोक्सोमा पुगेर असर गर्ने बताए । ‘जति सानो भयो, त्यति हानि गर्छ, नाक र मुखबाट छिरेको कणलाई केहीले छान्दैन,’ उनले भने, ‘सुरुमा खोकी लाग्ने, आँखा चिलाउने, नाक बन्द हुने, हाच्छिउँ आउने भइरहन्छ । लामो समयसम्म पनि यस्ता कण फोक्सोमा गइरह्यो भने दमको समस्या देखिन्छ । मुटुमा असर गरेर हृदयाघात, पक्षघात र फोक्सोको क्यान्सरसमेत हुन्छ ।’
नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्द्धनको लक्ष्य लिइएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) को घोषणापत्रमा समेत राजधानीलाई दुई वर्षभित्र फोहोर, धूलो, हिलो र प्रदूषणमुक्त बनाइने उल्लेख छ तर सर्वसाधारण दूषित हावा लिन बाध्य छन् ।
नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट सरकारले वञ्चित गरेको डा. कार्कीले बताए । ‘संविधानले दिएको अधिकार पाउनबाट जनता वञ्चित भएकाले अनाहकमा मृत्युवरण गर्नुपरेको छ,’ कार्कीले भने, ‘आर्थिक बोझ उत्तिकै भोग्नुपरेको छ ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले चुनावी घोषणापत्रमा काठमाडौंलाई ‘नो मास्क सिटी’ बनाउने घोषणा गरेका थिए । अझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मास्क नलगाई हिँड्न सक्ने वातावरण भइसकेको दाबी गरेका थिए । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दुई किलोमिटर र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ११ सय मिटर पर रहेको रत्नपार्कको वायु मापन केन्द्रमा वरिपरि कस्तो हावा चलिरहन्छ भन्ने रेकर्ड भइरहेको छ । त्यसलाई वातावरण विभागको वेबसाइटमा सहजै हेर्न सकिन्छ ।
प्रदूषण मापन केन्द्रमा पछिल्लो एक सातामा रत्नपार्कमा पीएम २.५ का कण भएका दूषित हावा प्रतिघनमिटर १४४ सम्म मापन भएको छ । बिहान र बेलुका स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कण हावामा देखिएको विभागले जनाएको छ । रत्नपार्कमा गत शुक्रबार बिहान ८ बजे प्रतिघनमिटर १२१, बेलुका ९५, शनिबार बिहान ९३ रहेकामा बेलुका ८५ मापन भएको थियो । त्यस्तै आइतबार बिहान प्रतिघनमिटर १०३ रहेकामा राति १०८ पुगेको थियो । सोमबार बिहान ८ बजे १४० रहेकामा बेलुका भने ८४ मापन भएको थियो । मंगलबार बिहान ८ बजे १४६ मापन भएकामा बेलुका ८६, बुधबार बिहान १४४ र बेलुका ८६ प्रतिघनमिटर कण मापन गरिएको थियो । बिहीबार बिहान ८ बजे १३४ मापन गरिएको छ ।
ललितपुरको भैंसेपाटीमा पनि पछिल्लो २४ घण्टामा पीएम २.५ कणहरू प्रतिघनमिटर ६५ मापन भएको छ । भैंसेपाटीमा आइतबार बिहान ११० प्रतिघनमिटरसम्म मापन भएको थियो । पुल्चोकको अवस्था पनि उही छ । बिहीबार ६ बजे पीएम २.५ भन्दा सानो धूलोको कण ५४ मापन गरिएको छ, जुन मापदण्डभन्दा बढी हो । विभागले राखेको मापन केन्द्रमध्ये शंखपार्कमा पछिल्लो २४ घण्टामा पीएम २.५ का धूलोको कण मापदण्डभन्दा कम पाइएको छ । तर बुधबार बिहान ९ बजे भने यो केन्द्रमा पनि यस्तो कण १२० मापन भएको छ । ‘उपत्यकामा पीएम २.५ भन्दा सानो धूलो र धूवाँका कण यो मौसममा बढी देखिएको छ,’ विभागका सूचना अधिकृत शंकर पौडेलले भने । यो कण न्यून गर्न विकास निर्माण गर्ने र सवारी प्रदूषण जाँच गर्ने निकायले पनि चासो दिनुपर्ने उनले बताए । फोहोर जलाउँदा पनि यस्तो दूषित हावा निस्कने उनले बताए ।
काठमाडौं उपत्यकाको कचौरा आकारको भौगोलिक अवस्थितिले विभिन्न स्रोतबाट निस्कने वायुमण्डलीय ‘इन्भर्सन’ का कारण फैलावट हुन नपाई लामो समयसम्म वायुमण्डलमा रहने विभागका निरीक्षक राजेश्वर पौडेलले बताए । ‘बिहान हावा चल्दैन, धूवाँ–धूलोको कण तलै हुन्छ, ११/१२ बजेपछि हावा बढी चल्न थालेसँगै कणहरू पनि बिस्तारै घट्छन्,’ उनले भने, ‘बेलुका फेरि बिहानकै जस्तो हुन्छ ।’ वातावरण विभागले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार उपत्यकामा पूर्वाधार निर्माणबाट ५३, सवारीसाधनबाट ३०, इँटाभट्टाबाट नौ, घरभित्रको धूवाँबाट पाँच, फोहोर जलाउँदा एक र कारखानाबाट एक प्रतिशत प्रदूषण निस्कने गरेको देखाएको थियो । ‘त्यसबेला सडक निर्माण चलिरहेको थियो, अहिले यो कम भएको छ । अब अरू कारणले बढेको हुन सक्छ, अध्ययनका क्रममा छौं,’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने । उपत्यकामा भक्तपुरमा ६२, ललितपुरमा ३३, काठमाडौंमा १८ वटा इँटाभट्टा छन् ।
७७ गाडी खराब
सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषणको अवस्था पत्ता लगाउन वातावरण विभागले पाँच महिनाअघि उपत्यकामा गुड्ने सवारीको प्रदूषण जाँच पनि गरेको थियो । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीले बढी धूवाँ फाल्ने गरेको जाँचबाट देखिएको थियो । पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा बढीमा ३ प्रतिशत मात्रै हुनुपर्छ ।
त्यस्तै डिजेलबाट चल्ने सवारीको धूवाँको घनत्व ६५ हुनुपर्छ । ‘परीक्षण गरेकामध्ये धेरैजसो शतप्रतिशतसम्म प्रदूषित पाइयो,’ वातावरण विज्ञ एवं वातावरण विभागका निरीक्षक पौडेलले भने । डिजेलबाट चल्ने ४ सय ३२ सवारी जाँच गर्दा एक सय एकवटा अर्थात् २३ प्रतिशत मात्रै मापदण्डभित्र धूवाँ फ्याँक्ने पाइएको उनले बताए । ७७ प्रतिशत सवारीले बढी धूवाँ फ्याँक्ने गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै पेट्रोलबाट चल्ने ५ सय सवारी परीक्षण गर्दा ३ सय ३० वटा अर्थात् ६६ प्रतिशतको मात्रै कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा सही पाइएको थियो । ३४ प्रतिशत सवारीले कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा बढी फ्याँक्ने गरेको पाइएको उनले बताए ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधरले वातावरण सुधार गर्न योजना, नीति बनाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बढ्दै गएको बताए । ‘अहिलेसम्म बनेको योजना कार्यान्वयन गर्ने नियत नभएकै कारण हामी अस्वस्थ हावा लिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएकै छैन । सरकारले काम गरेको भन्दै प्रचार गरिरहेको हुन्छ । सुधार भएको हो/होइन त हरेक दिन जनताले सास फेर्दा नै देखिन्छ । सुधार भएको कसैले पत्याउँदैनन् ।’
सुधार गर्ने चाहना राख्ने हो भने धेरै लगानीको पनि आवश्यक नपर्ने उनले बताए । जति पनि खाल्डाखुल्डी छन्, पिच गर्ने, सवारीमा हरियो स्टिकरलाई प्रभावकारी बनाउने र हरियाली पार्क बढाउनेबित्तिकै सुधार हुने उनले बताए । विद्युतीय सवारीलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।
विभागकी महानिर्देशक आभा श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् ।